ရေစိုခံနိုင်သည့်သဘာဝလေး - လက်သည်းမျက်ခုံး - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ | WoopShop®
ရေစိုခံသဘာဝလေး - ခြေသည်းမျက်ခုံး
အရောင်4231
ရေစိုခံသဘာဝလေး - ခြေသည်းမျက်ခုံး -4backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပါဝင်ပစ္စည်း: မျက်ခုံး Enhancer
မော်ဒယ်နံပါတ် -4Head Eyebrow Pencil
အကျိုးကျေးဇူး - ကြာရှည်ခံခြင်း၊ ဝတ်ဆင်ရန်လွယ်ကူခြင်း၊
အမျိုးအစား: မျက်ခုံး Enhancer
ပိုက်ကွန် WT: 2g
ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ / ဒေသ - တရုတ်
ဖြစ်နိုင်သမျှအတိုင်းကြိမ်ဒဏ်အဖြစ်အနီးကပ်စတင်ကာပြင်ထောင့်ဘက်မျက်ခွံများနှင့်အလုပ်၏အတွင်းစိတ်ထောင့်မှာစတင်မယ့်လိုင်းဆွဲပါ။ တစ်ဦးထက်ပိုသိသိသာသာကြည့်ဘို့, ပြင်ထောင့်မှာ width ကိုတည်ဆောက်စေ။ တစ်ဦးချင်းစီကိုအသုံးပြုခြင်းပြီးနောက်လုံခြုံ eyeliner ဦးထုပ်။
99 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
отличныйкарандаш, влагостойкий, спасибопродавцу
အရောင်ကြီး !! အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်